Imodeli yase China: JM272QE-144Hz mveliso kunye nabenzi | Umboniso ogqibeleleyo
Ukubeka iliso kwiCCTV
Ungcelele lwentsimbi oluyi-4K
Ungcelele lwePlastiki lwe4K
Ukubeka iliso kwimidlalo
Uthotho lwe PM27
Uthotho lwama-MM27 lujijekile
YM32 Series egobile
Iimpawu ezibonakalayo ze-QHD zixhaswa ngokuqaqambileyo kwinqanaba lokuhlaziya elikhawulezayo le-144hz ukuqinisekisa ukuba ukulandelelana okuhamba ngokukhawuleza kubonakala kuthambile kwaye kuneenkcukacha, kukunika ukongeza xa udlala. Kwaye, ukuba unayo ikhadi yemizobo ehambelanayo ye-AMD, unokusebenzisa ithuba kwitekhnoloji ye-FreeSync yokubek 'esweni ukuphelisa iinyembezi kunye nokuthintitha xa udlala. Uyakwazi ukugcina kunye nayiphi na imarathons yokudlala ebusuku, njengoko ukubeka iliso kwimodi yesikrini ekunciphiseni ukukhutshwa kokukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka kwaye kunceda ukukhusela ukudinwa kwamehlo.
Thumela i-imeyile kuthi Incwadana yemveliso
Iphaneli ye-27 "IPS ene-2560x1440 QHD Resolution
Ixesha lokuphendula le-MPRT 1ms kunye nereyithi yokuhlaziya ye-95Hz
Bonisa iPort + i-HDMI izihlanganisi
Akukho ukuthintitha okanye ukukrazula ngeTekhnoloji ye-FreeSync ye-AMD
Iphaneli ye-IPS izisa ii-angles ezibonakalayo ezingcono
I-FlickerFree kunye neTekhnoloji yeNdlela eseBlue
Yintoni intlawulo yokuhlaziya?
Into yokuqala ekufuneka siyenzile kukuba "Yintoni kanye kanye inqanaba lokuhlaziya?" Ngethamsanqa ayinzima kakhulu. Ireyithi yokuhlaziya liphela linani lamaxesha umboniso ohlaziya umfanekiso owubonisayo ngomzuzwana. Ungakuqonda oku ngokuthelekisa inqanaba lesakhelo kwiifilimu okanye kwimidlalo. Ukuba ifilimu yadutyulwa kwizakhelo ezingama-24 ngomzuzwana (njengakwimigangatho yeemovie), umxholo womthombo ubonakalisa kuphela imifanekiso engama-24 eyahlukileyo ngomzuzwana. Kwangokunjalo, umboniso wenqanaba lokubonisa le-60Hz ibonisa "iifreyimu" ezingama-60 ngomzuzwana. Ayizizo izakhelo zokwenyani, kuba umboniso uya kuhlaziya amaxesha angama-60 ngomzuzwana nokuba akukho lutshintsho lwepikseli enye, kwaye umboniso ubonakalisa kuphela umthombo owondliweyo. Nangona kunjalo, umzekeliso iseyindlela elula yokuqonda umxholo osisiseko emva kwenqanaba lokuhlaziya. Ixabiso eliphezulu lokuhlaziya ke ngoko lithetha ukubanakho ukuphatha inqanaba lesakhelo esiphezulu. Khawukhumbule nje, ukuba umboniso ubonakalisa kuphela umthombo owondliweyo, kwaye ngenxa yoko, inqanaba lokuhlaziya eliphezulu alinakuphucula amava akho ukuba ireyithi yakho yokuhlaziya sele ingaphezulu kwenqanaba lesakhelo somthombo wakho.
Kutheni ibalulekile nje?
Xa uqhagamshela ukubeka esweni kwakho kwi-GPU (i-Graphics Processing Unit / iKhadi leMizobo) esweni iya kubonisa nantoni na ethunyelwa yi-GPU kuyo, nakweyiphi na inqanaba lesakhelo eliyithumelayo, ngaphakathi okanye ngaphantsi kwelonareyithi liphezulu lesakhelo. Amaxabiso esakhelo esikhawulezayo avumela nasiphi na isindululo ukuba sinikezelwe kwiscreen ngokutyibilikayo (Umzobo 1), ngokuncitshiswa kwentshukumo yokukhanya. Oku kubaluleke kakhulu xa ubukele ividiyo ekhawulezayo okanye imidlalo.
Hlaziya iNqanaba kunye neMidlalo
Yonke imidlalo yevidiyo inikezelwa ngesixhobo sekhompyuter, ngaphandle kweqonga okanye imizobo. Kakhulu (ngakumbi kwiqonga lePC), izakhelo ziyakhutshwa ngokukhawuleza njengoko zinokuveliswa, kuba oku kuhlala kuguqulela kumdlalo weqonga ogudileyo nolunge ngakumbi. Kuya kubakho ukulibaziseka okuncinci phakathi kwesakhelo ngasinye kwaye ngenxa yoko igalelo lincinci.
Ingxaki enokuthi yenzeke ngamanye amaxesha kuxa izakhelo zinikezelwa ngokukhawuleza kuneqondo apho isiboniso sihlaziya khona. Ukuba unomboniso we-60Hz, osetyenziselwa ukudlala umdlalo onikezela izakhelo ezingama-75 ngomzuzwana, unokufumana into ebizwa ngokuba "kukukrazula isikrini". Oku kuyenzeka kuba umboniso, owamkela igalelo kwi-GPU ngamanye amaxesha aqhelekileyo, kunokwenzeka ubambe izixhobo zekhompyutha phakathi kwezakhelo. Iziphumo zoku kukrazuka kwescreen kunye nejerky, intshukumo engalinganiyo. Imidlalo emininzi ikuvumela ukuba uthabathe inqanaba lesakhelo, kodwa oku kuthetha ukuba awusebenzisi iPC yakho kwisakhono sayo esipheleleyo. Kutheni uchitha imali eninzi kwizinto zamva nje kunye nezona zinkulu njengee-GPU kunye nee-CPUs, i-RAM kunye ne-SSD xa uza kubamba amandla abo?
Sithini isisombululo koku, unokuzibuza? Iqondo eliphezulu lokuhlaziya. Oku kuthetha ukuba unokuthenga i-120Hz, i-144Hz okanye i-monitor ye-165Hz. Ezi ziboniso zinokuphatha ukuya kwisakhelo se-165 ngomzuzwana kwaye iziphumo zilula kakhulu kumdlalo wokudlala. Ukuphucula ukusuka kwi-60Hz ukuya kwi-120Hz, i-144Hz okanye i-165Hz ngumahluko obonakalayo. Yinto ekufuneka uyibonile ngokwakho, kwaye ngekhe uyenze ngokujonga ividiyo yayo kumboniso we-60Hz.
Ireyithi yokuhlaziya eguqukayo, nangona kunjalo, itekhnoloji entsha yokusika eya isiba ngakumbi nangakumbi. I-NVIDIA ibiza le G-SYNC, ngelixa i-AMD iyibiza ngokuba yiFreeSync, kodwa owona mxholo uyafana. Umboniso nge-G-SYNC uyakucela ikhadi lemizobo ukuba lihambisa ngokukhawuleza kangakanani na izakhelo, kwaye alungelelanise inqanaba lokuhlaziya ngokufanelekileyo. Oku kuyakususa ukukrazula isikrini nakweyiphi na inqanaba lesakhelo ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphezulu lokuhlaziya esweni. I-G-SYNC yitekhnoloji ethi i-NVIDIA ihlawulise umrhumo ophezulu welayisensi kwaye inokongeza amakhulu eedola kwixabiso lokubeka esweni. I-FreeSync kwelinye icala itekhnoloji yemithombo evulekileyo ebonelelwe yi-AMD, kwaye yongeza kuphela imali encinci kwiindleko zokubeka esweni. Kwimbonakalo egqibeleleyo sifaka iFreeSync kuzo zonke iimonitha zethu zomdlalo njengomgangatho.
Ngaba ndithenga i-G-Sync kunye neFreeSync ehambelanayo iliso lomdlalo?
Ukuthetha ngokubanzi, iFreesync ibaluleke kakhulu kwimidlalo, ayisiyiyo eyokuthintela ukukrazula kodwa yokuqinisekisa amava agudileyo ngokubanzi. Oku kuyinyani ngakumbi ukuba usebenzisa izixhobo zomdlalo weqonga okhupha izakhelo ezingaphezulu kwesiphatho sakho.
I-G-Sync kunye neFreeSync zizisombululo kuyo yomibini le micimbi ngokuba nomboniso ohlaziyiweyo ngesantya esifanayo nezakhelo ezinikezelwa likhadi lemizobo, okukhokelela kwimidlalo egudileyo, engena thixo.
Uluhlu oluphezulu lwamandla (i-HDR) lubonisa umahluko onzulu ngokuvelisa kwakhona uluhlu oluphezulu lokukhanya. Ukubeka esweni i-HDR kunokwenza ukuqaqamba kubonakale kukhanya kwaye kuhambise izithunzi ezityebileyo. Ukuphucula ikhompyuter yakho ngesilumkiso se-HDR kufanelekile ukuba udlala imidlalo yevidiyo ngemizobo esemgangathweni okanye ubukele iividiyo kwisisombululo se-HD.
Ngaphandle kokungena nzulu kwiinkcukacha zobuchwephesha, umboniso we-HDR uvelisa ukukhanya okukhulu kunye nobunzulu bemibala kunezikrini ezakhelwe ukuhlangabezana nemigangatho emidala.
1MS Ixesha lokuphendula kunciphisa ukukhukhumeza kunye nokufiphaza ngelixa utshintsha iipikseli, uhlala ugcina utshaba kunye nomhlaba ngokuchanekileyo kugxilwe ngexesha lesiphithiphithi.
Umphumo wombala we-10 inokumela phakathi kwe-0000000000 ukuya kwi-1111111111 kumbala ngamnye obomvu, oluhlaza okwesibhakabhaka, kunye nomthubi, okuthetha ukuba umntu angabonisa imibala engama-64x ye-8-bit. Oku kunokuphinda kuvelise imibala engama-1024x1024x1024 = 1,073,741,824 imibala, yona leyo yimali enkulu kakhulu kunemibala engama-8. Ngesi sizathu, uninzi lwee-gradients emfanekisweni ziya kujongeka zibe mpuluswa kumfanekiso ongentla, kunye nemifanekiso eli-10 ekubonakala ukuba ibhetele ngokungcono kunabalingane bayo abangama-8-bit.
Egqithileyo Umzekelo: YM25BFN-165Hz
Okulandelayo: Umzekelo: OG34RWA-165Hz
I-144hz yokuHlola iMidlalo
1ms Ukubeka iliso kwimidlalo
I-intshi ye-intshi eyi-intshi eyi-144hz
Ukubeka iliso kwimidlalo egobile
Ukubeka iliso kwimidlalo i-144hz 1ms
Umboniso ogqibeleleyo weThekhinoloji Co., Ltd.